May Nyane: လတ်တလော ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက်၊ ဖြစ်တည်မှု...
interesting post. but i learnt that most are quite different from my favs.
ဘာများလဲလို့ဗျာ။ ကိုယ့်အသက်အရွယ်မှ ကိုယ်အားမနာ လူငယ်တွေ ရူးပေါပေါ လုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်သတဲ့လားဗျာ ။ အံ့ပါရော။
မ ရေ… အမှတ်တရ tagပေးတာ ကျေးဇူးပါ… နဂိုကလဲ ရေးချင်ချင်ဆိုတော့ ခုရေးပြီးတင်လိုက်ပြီနော်…မ နဲ့ များဆုံဖြစ်ရင် ပုဝါလှလှလေး တထည် လက်ဆောင်ပေးချင်ပါရဲ့… ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသုံးတတ်ပေမယ့် ပုဝါလှလှလေးတွေ တွေ့ ရင် သိပ်ဝယ်ချင်တာ… မေမေ့အတွက် ခဏခဏ ၀ယ်ဖြစ်တယ်…
လာလည်သွားပါတယ် ဆရာမရေ။ Tag ကလေးတွေ ရေးကြတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးပါ။
လူဆိုတာ လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် နေတာကို လူပီသတယ်လို့ခေါ်တယ်။ အခု မမေငြိမ်းရေးထားတာ သူ့အသက်အရွယ်ကို ထိပါးစေတဲ့ ပေါ့သွပ်မှု လုံးဝ မရှိဘူး။ သူ့ကို ခင်တဲ့ချစ်တဲ့လူက tag တယ်။ သူက ပြန်ရေးတယ်၊ တဆင့် ပြန် tag တယ်။ အဲဒါကို သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ လူပီသမှုလို့ခေါ်တယ်။ ခင်ဗျားသာ လူဖြစ်ပြီးတော့ လူမပီမသနဲ့ နာမည်မဖော်ရဲဘဲ အမျိုးသမီးတယောက်ကို လက်သီးပုန်းလာပြတာ မရှက်ဘူးလား။
အစ်မရေ တက်ဂ်ထားတာလေး ခုမှ ရေးပြီးတယ်။ အစ်မကော အလုပ်များနေလား။ အဆင်ပြေပါစေနော် :)
ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အမူအကျင့်ကို သူများအပေါ်မလုပ်ရဘူး ဆိုတာထောက်ခံ တယ်အမ ရေ..
စမ်းသပ်ခံမြေဆိုတဲ့သူကတော့ အဆင့်မရှိတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါ ယဉ်ကျေးမှု မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ဒေသကလာတယ်ထင်ပါ့ဗျာ...
သူ့ ကွန်မန့်လေးကိုဖျက်မပစ်ပါနဲ့အမရာ.. သဘောထားသေးတယ်ထင်နေဦးမယ်
ဒီ ပို့ စ်နဲ့ တော့မဆိုင်ပေမယ့် ကွန်မန့် လေးတစ်ခုကြောင့် ကဗျာလေးရေးဖြစ်သွားပါကြောင်း။
လူလို မသိ ၊ ကျင့်ဝတ်မရှိ
မ ရေ… ဆီဗုံးထဲမှာ တက်ဂ်ထားကြောင်း သတင်းလေးပေးတာ မတွေ့ မှာစိုးလို့ဒီမှာ ထပ်ရေးလိုက်တာပါ…မ ခရီးကပြန်လာလို့ နားနားနေနေရှိရင် ရေးပေးနော်… Haveanice trip…
a san that khan myae = negative thinker